महिलाले गर्नै नहुने यी १० काम, मानिन्छ निकै अशुभ:: Naya Nepal
महिलाले गर्नै नहुने यी १० काम, मानिन्छ निकै अशुभ
काठमाडौँ । एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन् । महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् ।
हरेक धर्ममा महिलाहरुको स्थान माथि राखिएको हुन्छ । यति हुँदाहुदै पनि महिलाको लागि कति काम यस्तो बताइएको छ कि जुन उनीहरुलाई गर्न इन्कार गरिएको छ ।
घर छोडेर हिँड्नुहुँदैन:
जनै लगाउन नहुने:
धनकी देवी लक्ष्मीले बताएका ती पाँच प्रकारका व्यक्ति, जसको घरमा टिक्दैन धन
काठमाडौँ । हिन्दू शास्त्र अनुसार समुन्द्र मन्थन भन्दा पहिला स्वर्गका देवताहरु निर्धन भएका थिए । देवराज इन्द्रले लक्ष्मीको स्तुति गरेपछि धनकी देवी लक्ष्मी खुशी भएर इन्द्रलाई द्धादशाक्षर मन्त्र दिनको तीनपल्ट पाठ गर्न सुझाएका थिए ।
रातको १२ बजे जन्मदिन मनाउनुहुन्छ ? सावधान ! दुर्भाग्यको ढोकालाई…
हिंसाः जुन घरमा धेरै मासु,माछा को प्रयोग हुन्छ त्यहाँ पनि लक्ष्मीको बास हुन सक्दैन । स्त्रीको अपमानःस्त्रीलाई अनादर हुने घरमा पनि लक्ष्मीको बास नहुने कथन छ।
स्त्रीको अपमानः स्त्रीलाई अनादर हुने घरमा पनि लक्ष्मीको बास नहुने कथन छ।
सर्वप्रथम मेथीलाई २ घण्टासम्म पानीमा भिजाएपछि भिजाएको मेथी र पानीलाई अलग अलग छानेर छुट्याउनुहोस् ।
भान्सामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखीम कम गर्न अपनाउनुहोस् यी १५ व्यवहारीक…
टमाटरको सहायताले गायब हुन्छ तपाईको अनुहारको अनावश्यक रौँ, जान्नुहोस्…